Suudaan baqattoota Oromoo hidhaa fi rukuttaan dararti; humnaanis gara Itoophiyaatti deebisti - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Suudaan baqattoota Oromoo hidhaa fi rukuttaan dararti; humnaanis gara Itoophiyaatti deebisti
Suudaan baqattoota Oromoo hidhaa fi rukuttaan dararti; humnaanis gara Itoophiyaatti deebisti
Haalli baqattoota Oromoo 2016, erga Suudaanii fi Gamtaan Awurooppaa waliigalanii, eegaleeti kan hammaataa dhufe
Woggaa dabre keessa baqattoota Oromooo Suudaan keessa jiraataniif haalli hammaataati kan dhufe. Baqattoonni Oromoo jumlaadhaan adamsamu. Ni hidhamu. Ni dhaanamu. Adabbii Doolaara Ameerikaa hanga 800 gayu kaffaluudhaaf dirqamu. Rakkoon baqattoota Oromoo Suudaan keessa jiraatanii inni guddaan humnaan qabamaa gara Itoophiyaatti darbamuudha. Kuni kan ta’aa jiru yeroo inni biyya keessa jiru humna Agaaziin ajjeefamuu, hidhamuu fi dararamuudha.
Garajabeennii fi haalli Suudaan baqattoota itti keessummeessitu hammaataa kan dhufe woggaa darbee kaaseeti. Kuni sochii Gamtaan Awurooppaa baqattoonni Gaafa Afrikaa irraa gara Awurooppaa akka hin imalleef eegaleen wolitti hidhata qaba. Sochii baqattootaatti iggitii godhuudhaaf Gamtaan Awurooppaa biyyoota mirga namaa sarbuudhaan beekkaman kanniin akka Suudaanii fi Itoophiyaatti maallaqa jigsuun isaa ni beekama. Sochii baqattootaatti iggitii godhuudhaaf Suudaan Gamtaa Awuroopaa irraa Doolaara Ameerikaa miliyoona 140 oli kan argatte.
Biyyoonni maallaqa Gamtaa Awurooppaa irraa fudhatan hundi, Itoophiyaas dabalatee, kan hojjataa jiran daangaa marsuu, baqattoota iddoo isaan jiraatanitti marsuu fi jireenya namoota rakkoon biyya irraa baastee daran hadheessuudha.
‘Baqattoonni gara Awurooppaa akka hin deemne waan dandeennu hunda godhaa jira. Yaaliin keenna hin dinqisiifatamu yoo ta’e, balbala bannee gadi dhiisna,’ jechuun dubbate ajajaan humna furguggaatuu Suudaan, Mohamed Hamdan.
‘Yeroo baqattoonni Itoophiyaa rukutaman, hidhamanii fi biyya irraa dhufanitti humnaan darbaman Mootummaa Al Bashiiriif gargaarsa laatuun Gamtaan Awurooppaa tankaarfii Suudaan seera qabeessa fakkeesaa jira,’ jetti Judith Sargentini, miseensi Paarlaamaa Awurooppaa.
Bara 2016 keessaa baqattoota 30,000tti tilmaamamantu Suudaan keessa dabruudhaan Xaaliyaanii seenuu danda’e. Yeroo ammaa baqqattoota Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Eertiraa 500,000 itti timaamamantu Suudaan keessa jiraata jedhama.
baqattoota suudaan jiraatan
imala gara xaaliyaanii
Previous articleJarmayaa siyaasaa fi tarsiimoo qabsoo cimaa dhabuudha injifannoo dhiigaan argame dabarsinee akka laannu kan nu godhaa jiru
Next articleADO, ABO, KWO fi ABO-T Oromoon weerara ‘Liyyuu Poolisiin’ irratti bane ufirraa akka faccisuuf waamicha dhiyeessan